AVANTAGE EN NATURE EN IRSA
Date: 14 mars 2017 - 18:24
salama daholo tompoko o. Ny avantage en nature ve miditra ho isan'ny Elements de salaire izany oe tokony akana CNAPS sy OSTIE ihany koa sa tonga de any amin'ny base imposable no ampiana. Ra ny fahalalako azy mantsy de Revenu brut = Salaire brut + avantage en nature. Misaotra antsika rehtra mamaly.
Re: AVANTAGE EN NATURE EN IRSA
Date: 14 mars 2017 - 20:08
Ny revenus a caracteres fixes no hangalana ny cnaps sy ostie. Ny revenus fixes dia tokony voatanisa mazava tsara ao anaty contrat. Ny avantage en nature dia anisany revenu ka raha toa ka fixe io dia miditra tsara ao anaty calcul.
Izany hoe ny cnaps sy ostie atao declaration dia tsy tokony hisy fiovana mandritra ny iray taona satria revenu fixe no hahitana azy.
Ny IRSA kosa dia misy fiovana matetika satria eo no miditra ny revenus à caractere variables.
Base imposable = revenu a caractere fixe - cnaps & ostie + revenus variables
Formule tsotsotra io fa mbola complexe kokoa rehefa tena ampiarina
Date: 15 mars 2017 - 15:54
Tandremo fa ny cantine dia avantage en nature ary fixe fa tsy imposable.
Date: 23 mars 2017 - 10:41
misy ny atao hoe : EFAN evaluation fiscal des avantages en nature ka efa misy taux appliquena ohatra amin'ny vehicule telephone autres dia noho izan ts hakana taxe hafa intsony ny aventage en nature fa miditra any ambany
Date: 23 mars 2017 - 15:55
Inona avy kay ny avantages en natures en IRSA,
Ary ny CNaPS/ahoana koa?
Misaotra an'izay hamaly